ယိုယွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကလွှမ်းမိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘိုအယူအဆလွှမ်းမိုးဖို့, အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နှင့်ကမ္ဘာအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပုံပျက်သောဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲသစ်ကိုဒဿနထဲက "တော်လှန်ရေး" လမ်းမဟုတျကွောငျးလူမှု labyrinth အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု။
21 ဒီဇင်ဘာလ 2017 မမြင်နိုင်သော Sociedad 0
အတူယဉ်ပါးဖြစ်ပျက်နှင့်အတူ conformist ထိုနေ့၏ "burp" ၏စည်းချက်မှ postulated ကြောင်းတစ်ဦးကမှတ်ချက်ပေးသည် "hum" ညဥ့်နှင့်၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခု ပို. ပို. ပေါ့ပေါ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်, နံနက်ယံ၌ "အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူ", အားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်ကပါဝင်ပတ်သက်နားလည်မှုပေမယ့်ဘာမှနားမလညျပါဘူးအားလုံးနီးပါးမီဒီယာ။ အများပြည်သူကျနော်တို့လမ်းကျဉ်းပေါ်တွင်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပေးသောပင် "wikipendia" တိုင်ပင်မဟုတ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ၏အပျနှံခွငျးနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်သတ္တိရှိသူတို့, မှားယှငျးဖို့ကြိုးစားနေ rants အသုံးပြုသောအခါတစ်ဦးကအလွန်ကြမ်းရုပ်ပုံလွှာ ဝိရောဓိများအပြည့်အဝရာစုနှစ်တစ်ခုယုံကြည်သောသူတို့သည်နှင့်ဘုံနှင့်အခြေခံစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ကမ္ဘာ၏ကျိုးကြောင်းသိမ်းသွင်းဖို့အနည်းငယ်ရည်ရွယ်ချက်များအဝိဇ္ဇာ၏, လျော့နည်းတောက်ပ။
ဤ ဒါဟာဘလော့ဂ်ကကမ်းလှမ်းအခွင့်အလမ်းမျးစားတဲ့ချွတ်ကျိုးပဲ့အမြင်ဖြစ်ပါသည် မမြင်ရတဲ့အထီးကျန်၎င်း၏အာကာသပစ်လွှတ်ခုနှစ်တွင်လူ့ဂုဏျသိက်ခာကိုအသကျရှငျစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်းကအပြင်းအထန်နေမကောင်းဂြိုလ်ဘို့ငြိုငြင်ရာတစ်ဖက်သက်လျှင်ရည်ရွယ်သည့်ပဲ့တင်သံအတွက်တစ်သံကို၌တိတ်ဆိတ်စွာနေသတိပေးချက်နှင့်အလွန်ကျယ်ပြန့်ဖွင့်ဖို့ ဆုံးရှုံးသွားသောနှင့် nameless ကျနော်တို့ကမ္ဘာကြီးကိုပဌနာဘာ, အနာပေါက်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်သေး, ဟောကိန်းထုတ်နှောက်မရှိပဲ, ဒါပေမယ့်လက်စားချေယူဖို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်မဟုတ် ကျနော်တို့သက်သာခြင်းမရှိဘဲနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများနှင့်ကျွန်တော်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံနှစ်ပေါင်းတူညီဖို့မြေအတွက်, ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦး derisory ပြစ်ဒဏ်ပိုဆိုးနှင့်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒေါသထွက်၎င်း၏အကြီးအကျယ်အကျိုးဆက်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် malodorous ရသောကြောင့်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်မှအော့အန်နေသည်ပေးဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ irreverent အပြုအမူ modify ဒါဟာတကယ့်မျက်စိကွယ်စေ၏။
ဖွစျနိုငျကွောငျးကြေညာချက်မချခင်အသိပညာအားဖြင့်ရှုံးနိမ်ရလဒ်အဖြစ်ရယူနေတဲ့နည်းလမ်းကသူတို့ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းရေးအတွက်ပိုပြီးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်နားလည်ရန်အဖြစ်, ဉာဏ်၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သနျ့မပါဝင်ပါဘူးရသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘုံ "ပူဖောင်း", လက်အား ပြစ်မှုကျူးလွန်သောသူတို့နှင့်အတူခရီးသွားဒဏ်ခံသံတမန်ရေး၎င်း၏မရှိခြင်း, မဆိုနိမိတ်လက္ခဏာအထူးသဖြင့်အလွဲသုံးစားမှု, ကိုယ်ပိုင်အများပြည်သူရန်ပုံငွေစုဆောင်းခြင်း, သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးစနစ်အကို clean up နှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ပျက်ကွက်ရရှိရန်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအတွက်, မိုက်မဲအထင်အမြင်ကြီးသောနှင့်လည်းရှုပ်ထွေးမထင်မှတ်, မကြာမီကျွန်တော်တို့ကသဘာဝ မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကို "မြောကျမောငျးမမြိုး" saltarines စေသည်သောပြုပြင်ကြလိမ့်မည်မျှော်လင့်ကြောင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု, သူမဇာတ်ကောင်ကစားမယ်ဆိုရင်ဒါ trashy မဟုတ်သောဒီမိုကရေစီနှင့်မျှမဆွဲဆောင်၏အာဏာရှင်မရေရာဒွိဟ၏ aligned ခေါင်းဆောင်များ, ကပျက်စီးကိန်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတွေ့မြင် 68 အတွက်တစ်ချော်သင်ဖြစ်နိုင်ပါစေ, ထာဝရ, မှီဝဲခြင်း ဒံယလေသ Cohn-ဘင်ကဲ့သို့မအောင်မြင်ပေမယ့်ရဲDIT ။
သူတို့ရဲ့ estates အားလုံးကိုနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများရှိ, လူမှုရေး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးမညီမျှမှုအပေါ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောနိမိတ်ချွင်းချက်မပါဘဲထိန်းချုပ်တဲ့ code ကိုကုန်ဆုံးဘားနှင့်အတူတစ်ကတ်ထူပြား box ထဲမှာငွေတစ်ဦးထုပ်ပိုး Alarm လေဟာနယ်ဖြစ်စေတဲ့ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ တချို့ကဝါရင့်နှင့်ရဲ စီးပွားရေးပညာရှင်များနှင့် "စိတ်ပညာရှင်" တစ်လောကလုံးလူမှုဗေဒ, နည်းနည်းမျှော်လင့်ချက်တစ်ယေဘုယျ catharsis ၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်းရှိကွောငျးခန့်မှန်းကြောင်း "လျော်ကြေးငွေ" နှင့်စိတ်ကိုအားကောင်းလာစေပြီး, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး၏ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလေဖြတ်အောင်လုပ်ရန်ပါပြီ။ သံသယများနှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်တန်ဖိုးများဆုံးရှုံးသွားရုံအလုပ်မဖြစ်သို့မဟုတ်ဘယ်လောက်နည်းနည်းဘယ်အရာကိုမျှအရာခပ်သိမ်း၏, ကတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျနော်တို့သိသာတဲ့အမည်မသိလေတိုက်ဖြစ်စေသောတစ်ဦး Chimera ၏နည်းနည်းပဲ့တင်သံမကြားကြဘူးဆက်ပြီး လက်လှမ်းမမှီပါနှင့်အစဉ်အမြဲ incalculable သူလှဲမှားသောဖန်ဆင်းသို့မဟုတ်ဝှက်ထား, အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဂိမ်းနဲ့တူကဒြပ်စင်လျစ်လျူရှု, လက်ထိတ်ခတ်နှင့်အတူကိုကွောကျရှံ့ချည်ထားခံရမပါဘဲအများကိန်းနှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှော့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းဖွင့်လှစ်သောသော့ချက်ခဲ့ကြသည်ထားပါတယ် အေဂျင်စီ၏အရေးကြီးသောကြောက်ရွံ့သို့မဟုတ်ကြိုးနှံမရှိခြင်းထဲကဖြစ်စေ, ရှေ့တော်၌ပြုသောအမှုဘဲ၏ဝဒေနာမပါဘဲလွတ်လပ်ခွင့်ခုခံကာကွယ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကာကွယ်ပေးသည်ရာ။
နိုင်ရန်အတွက်မျှဝေအကြောင်းပြချက်နှင့်ကွားနိုငျနှင့်ပွင့်လင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏သိပ်သည်းဆအားလုံးကိုငြိမ်းချမ်းစွာ, အလှနျပူ "ကျူးကျော်" ကကျောထောက်နောက်ခံတစ်ဘုံအရေးပါနှင့်အားကောင်း, သက်ဆိုင်ရာ, expressive and မြဲအသိခိုင်မာစေရန်လိုအပ်သောကြောင့် အကြောင်း, ဝှက်ထားသောလျှော့ချခြင်းနှင့်အပြိုင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းတဲ့ မမြင်ရတဲ့ကမ္ဘာကြီး ကြောင်းကြောက်ရွံ့ခြင်း၌ငြိမ်ဝပ်စွာနေတည်ရှိသည်သောအရာအချို့ကုန်ပစ္စည်းများဖေါ်ပြခြင်း, ရှင်သန်မှုအာဏာများဖြန့်ဖြူးမျှတတဲ့နှင့်ပိုပြီးသာတူညီမျှဖြစ်သင့်ကြောင်းသို့မှသာပိုမိုတရားမျှတမှုနှင့်လျော့နည်းလူမှုရေးအရမျက်စိကန်းတောင်းဆို, သူတို့ရဲ့တန်းတူအဆင့်အတန်းအခြားသူများနှင့်ကန့်သတ် ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ယျသိရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလိုတော်နှင့်အတူညီတည်းကျနော်တို့ပြီးသားချက်ချင်းမနေ့ကအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလျှင်, အရေးကြီးပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ပင်မလိုအပ်သောနှင့်ဤ shared ဘိုအယူအဆအတွက်အတူတကွနေထိုင်နေရန်အလွန်အန္တရာယ်မရှိတော့သာသနာ။
အသက်ရှင်နယျလှညျ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ, တစ်ပုလင်းထဲမှာဂါထာနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ, မေရှိယ, မီဒီယာနှင့် megalithic ၏ skeins အကြားတည်ရှိဟောပြော, ပြိုင်ပွဲ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်း၏ straitjacket နှင့်အတူမလုံခြုံမှုလောကီသားတို့သည်အမိန့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက် အဖြစ်ချမှတ်အကြွင်းမဲ့အာဏာလိုအပ်ချက်, အချိန်အခါမရွေးသူတို့တစ်တွေသဲကန္တာရရဲ့အစွန်းမှာပေါ်လာစေခြင်းငှါကာကွယ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု amorphous သင်္ဘောများနက်နဲသောအရာ, ခြောက်သွေ့အမြဲတမ်းသံမဏိနှင့်ရွှံ့၏နံရံတစ်ခုနှင့်အတူနယ်စပ်အရပ်၌မိစ္ဆာပရဒိသု၏တံလျှပ်ခဲ့ဖြုန်း ကျနော်တို့အတွက်ရှာဖွေ Install လုပ်နိင်, ယဉ်ကျေးမှု၏အရင်းအမြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်ယခု damp မြေပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်သိရတဖြည်းဖြည်းအကျိုးစီးပွားအခမဲ့စိတ်ကိုငတ်မွတ်ခေါင်းပါးငတ်ခြင်း, ရိုင်းစိုင်းလွှမ်းမိုးမှုမှလွတ်မြောက်ရန်တောင်တက်ရန်မည်သို့မည်ပုံမသိရောက်ရှိလာခဲ့သော ဖြစ်ခြင်း, အလွန်အားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းများမိုနှင့်စိတ်စွန်းကွက်ချန်ထားပေးသောတွင်းတဆင့်ရဲဖြစ်ခြင်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သွားလာတားဆီးတစ် supine အပြစ်ရှိတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် egocentricity သတိပေးခဲ့သည်သောပရမ်းပတာအားဖြင့်ငါတို့ကို paralyzing, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေစောင့်ကြည့်သောသူတို့အဘို့အရေးမယူ ရောထွေးနှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးသို့သူတို့ကိုငါဖွင့်ဖို့မကြိုးစားလျှင်, ဖြစ်နိုင်ပါသည်မောသေး .. သို့မဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်ပျက်စီးလွယ်မဟုတ်အတွေ့အကြုံနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအနုတ်လက္ခဏာအားဖြင့်အတု အရှင်နောက်ဆုံးမှနောက်ဆုံးခုန်ပေးခြင်းခွန်အားနှင့်အစစ်အမှန်နှင့်တည်မြဲတိုးတက်မှု၏ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောစိန်ခေါ်မှု, ဝင်ရိုးစွန်း Vault ဝေးကျနော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဆက်ပြီးသောငါတို့သည်သူတွေဟာအဆိုပါ Underthing ထုတ်လုပ်ထားသောပရဒိသုတဘက်, ကျော်လွန်. ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုဝှက်ထား။
အဘယ်အရာကိုမျှအဘယ်သူမျှမနောက်တဖန်ကျနော်တို့အချိန်ပေါ်နေဆဲပါလျှင်စိုက်နှင့်မျှမတို့သံသယပေါ်ထွန်းနိုငျသောရမည်ဖြစ်သည်သောလေတိုက်အဖြစ်ဆင်ခြင်တုံတရားစင်ကြယ်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အတွေး၏အခြားသောလမ်းဖြစ်နိုင်ပါသည်သော destination သည်ဖုံးကွယ်သောအခြားအကြံစည်မှုမှဖြတ်ကူးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတားမွစျနိုငျသညျ အန္တရာယ်များ, သဘောထောင်ချောက်, ငါတို့စွန့်ခွာမရနိုငျသောအနေဖြင့်ပင် morass, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ wriggle နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် labyrinth ကနေအလင်းကို output ဘို့လမ်းကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေစောင့်ရှောက်တားစီးဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။
ငါတို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအချို့သောအဆီးအတားဆွဲလျှင်အားလုံးတစ်ဦးစင်္ကြံထဲမှာယခုပုံမှန်အတိုင်းသည်အတိုင်း, ဘယ်နေရာမှာကိုရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲ, မသိသောတီထွင်နည်းနည်းသမာဓိရှိကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်နေရာချထား left ပင်နှင့်အတူ, ဒီ uncharted လယ်ပြင်၌ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်မဟုတ် လာနှင့်သန်း 7500 ကျော်တစ်တောတွင်းစူးစမ်းသွားခြေလှမ်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရ ညစ်ပတ်ပေရေ "စာရွက်များ" leafy နှင့်အဝိဇ္ဇာအကြားတည်ရှိပြီးသောနှိမ်နင်းသည်းမခံထဲမှာပညာတတ်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမစည်းလုံးညီညွတ်မှု, အားဖြင့်ပျက်စီးတစ်ခုကမ္ဘာမြေ၏မူပိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန်ကျန်ရှိနေဆဲကြောင်းဘယ်လောက်ရှည်လျားကာလမသိ insatiable ကိုက်စားခြင်း, အနည်းငယ်သာနို့အုံဘဝစိုးရိမ်ကြတဲ့သူတွေကိုထိုအရာရှိများသည်သံတမန်၏အဝိဇ္ဇာကသူတို့ကိုပေးနိုင်ကြောင်း, လေးစားမှုပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲကငွေတောင်းခံလွှာနှင့်များ၏ငွေပေးချေမှုအပေါ်တရားမျှတအခွန်ထိုက်တန်ပါတယ် နောက်ဆုံးရှေ့တန်းပေါ်မှာငါတို့စိတ်ကိုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ရှစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဒုက္ခကမ္ဘာနှင့်ဒါနည်းနည်းစိတ်သက်သာရာ, စိတ်ပျက်ကြုံတွေ့နေကြရသည်နှင့်ကြုံတွေ့နေကြရသည်သောအလွန်ကြီးစွာသောကျိုးလေ့လာနေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြသည်မဟုတ်သောသူတို့သည် shared နားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့်ညံ့ဖျင်းအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု။
ဤသည်ကိုစာသား shyly ဘယ်လိုကူးစက်သက်ရောက်ကျွန်တော်တစ်ဦးútimaစတင်ရန်ဘာသာသှငျးဖြစ်ကြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေစို့ရှောင်ရှား, အမည်မသိကွောကျရှံ့ခွငျး၏အချီးအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ် "တော်လှန်ရေး" မေ့လျော့, ကြှနျုပျတို့ ငါတို့သည်ငါတို့၏ခံမှုရှိတဲ့သဘောမျိုး၏အသိုက်ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားချင်အချိန်မတန်မီဖျက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေဒဏ်ငွေအရက်ဆိုင်များနှင့် Electrify သော့ခလောက်တွေရဲ့လှောင်အိမ်သို့ရ.
1968: ပြီးတာနဲ့အချိန်ပေါ်၌လွန်ခဲ့တဲ့ 50 နှစ်ပေါင်း .. အများအပြားရမ်းနှင့်အခြားသူများလိုအပ်မယ့်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တော်လှန်ရေးခဲ့သည်
စပိန်: က "Moro Muza" အားဖြင့်မှုတ်သွင်းအန္တရာယ်မှာပင်စင်လစာ, "အသစ်တဖန်နှင့်အသံတိတ်ကျူးကျော်"
2 နိုဝင်ဘာလ 2017 12
အချို့အလွန် idiomatic အခက်အခဲအမှန်တကယ်စာရင်းဇယားအမည်မသိသော်လည်း, သူကပိုဥရောပမြို့ရွာနှင့်မြို့ကြီးများရှိသတိပြုပါရန်လွှမ်းမိုးသောနှင့်ပိုပြီး "နိုင်ငံခြား" အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပြီးပုံရသည်တကယ်တော့ဒီartículoTweet Share [ ... ]
"လက်ချောင်းဖို့တာဝန်" အစိုးရလုပ်ခလစာ Catalunya, အရာရှိများ, အကြံပေးနှင့်။
3 နိုဝင်ဘာလ 2017 107
ဒီartículoTweetLosသူတို့ကိုဆုံးရှုံးကြောက်စိတ် .. လုပ်ခ Share ?. Carl Puigdemont Casamajó: 10.650 €လစဉ်။ ဒါရိုက်တာများ: 9.200 €အောက်ခြေမှာ link ကိုကနေလစဉ်ကိုးကား, သငျသညျဥပဒေထုတ်ဝေသော pdf ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် [ ... ]